Oganda: Nahoana no tsy nanoratra mikasika ilay tantara lehibe indrindra an’ny firenena ireo Ogandey blaogera ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Aogositra 2018 4:37 GMT
Nangina momba ny tantara lehibe indrindra an'ny firenena ny tontolon'ny blaogy Ogandey nandritra ireo herinandro maromaro lasa. Tamin'ny 5 Martsa, nanao fitokonana ireo ogandey mpitsara sy mpahay lalàna taorian'ny bemidina nataon'ireo mpiaro ny filoha tao amin'ny Fitsarana Avo mba hisamborana indray ireo olona enina noahiahiana ho mpamadika izay navotsotra rehefa nandoa onitra. Nampangaina ho nisolo tena ny People's Redemption Army (PRA) ireo olona noahiahiana ireo, vondrona mpikomy izay nisy an'i Dr. Kizza Besigye, kandidà avy tamin'ny antoko mpanohitra.
Tamin'ny 14 Martsa, navotsotra ny maro tamin'ireo noahiahiana taorian'ny voalaza fa nidarohana azy ireo, sy niaraka tamin'ny fisian'ny fitokonan'ny rafi-pitsaràna, dia nanao matso manodidina ny Fitsarana Avo mba hanadiovana azy amin'ilay zava-nitranga. Nandefa taratasy ho an'ny fitsarana ary nanolotra ny fialantsininy tamin'ity zava-nitranga ity ny Filoha Museveni. Fa naninona no tsy naneho hevitra mikasika ity tantara lehibe ity ny tontolon'ny blaogy? Mety noho ny tahotra valifaty avy amin'ny fanjakana na koa ny fandehanan'ny fitondran'i Luseveni toy ny isanandro no antony.
Any amin'ny vaovao hafa, mizara ny lesona azony avy tamin'ny fahitana adin'akoholahy vao maraina ny The Diocese of northern Uganda (Diosezin'ny faritra avaratr'i Ogandà):
Amin'ny 7:20 maraina izao, raha toa ka nanadio ny toerana aho, iny fa nahita akoholahy roa tena niady, ary nanintona ny saiko sy ireo mpikambana hafa tao amin'ny fianakaviako izany. Raha toa ka nanohy ny fijerena ity teatra ity aho, tsaroako tampoka ilay nolazain'ny mpitarika ny LRA, i Joseph Kony, nandritra ny ady tao Avaratr'i Oganda. Hoy i Kony ”“Lweny wa ni obedo calo pa twong gweno, ma acel ryemo lawote, itamo ni dong kibwoyo ento koni inongo ni en ma ocako ngwec ni dok cako ryemo lawote” izay midika fa toy ny adin'ny akoholahy anankiroa ity ady ity, ny iray mety ho mahery be ary mety mihevitra ianao fa nandresy ilay iray hafa, fa mahagaga, mety hahazo tanjaka indray ilay iray hafa ary hiverina hanohy ny ady.
Tany am-piandohan'ity herinandro ity, niditra tao anatin'ny resaka fandriampahalemana niarahana tamin'ny Fanjakana ao atsimon'i Sodana ny Lord's Resistance Army (LRA), taorian'ny herinandro maro nanoherana ilay resaka. Toy ny vintana faharoa no fahitan'ny Uganda-CAN izany:
Manome fanantenana vaovao ny fanapahankevitra noraisain'ny fanjakana ao Oganda sy ny Lord's Resistance Army (LRA) hoe mety ho hita ihany ny vahaolana milamina amin'ilay ady naharitra 21 taona. Ho an'ireo nandà ny hanohana ny dingana teo aloha – ny Fanjakana Amerikana, Firaisana Afrikana, IGAD mba hanononana vitsivitsy – mitondra vintana faharoa izany. Toy ny nafatrafarantsika foana, ilaina ny fanamafisana ny fifampitokisana sy ny fampahatsiarovan-tena amin'ny andraikitra mba hampahombiazana ireo fifampiraharahana.
Tamin'ity volana ity ihany koa, tonga tao Mogadishu ireo tarika Ogandey mba hampitomboan'ireo silamo ny afon'ireo mpikomy. Ao anatina adihevitra mandeha ao amin'ny tontolon'ny blaogy, tohanan'i Jackfruity ny hoe fanapahankevitra ratsy ilay fandefasana tafika ogandey mpampandry tany ho any Somalia :
Manohana i Josh fa hahazo fanohanana bebe kokoa noho ireo Etiopiana ny tarika ogandey, fa hatreto aloha, mbola baomba sy tafondro izay efa nahafaty olontsotra teo amin'ny 30 teo sy miaramila roa no nitsena azy ireo. Kely fanohanana ara-bola ary tsy ampy mpikambana ilay iraka mpampandry tany, ary marobe ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona no naneho ny ahiahiny hoe fiverenan'ny firotsahan'i Oganda any Kongo ilay hetsika, izay nahitàna fa nampijaly sy namono olontsotra ny UPDF. Ampitahain'ny matoandahatsoratry ny Friday's Daily Monitor ilay hafanampo Amerikana manohitra ny fampihorohoroana sy ny Ady Mangatsiaka sady nampangainy i Museveni ho ”milalao ity karatra fanoherana ny fampihorohoroana ity ho toy ny fitaovana hanampiana azy amin'ny fitadiavany fitondrana mandra-pahafaty”.
Ao anatina vaovao maivamaivana kokoa, ho an'ireo nanontany tena momba izay zavatra afaka atao raha toa ka manana 36 ora ao Kampala, manana tolokevitra vitsivitsy ny In An African Minute. Ity misy iray:
Zoma – 2 tolakandro: Mividy mpanjono ao amin'ny tsena fivarotana trondro ao Munyonyo- Farihy Viktoria, dia toetra mampiavaka ilay faritra ary toerana iray tena tsara be. Misy fomba hafa tsara kokoa hahitana ilay farihy noho ny eo ambonina kitay tsy dia azo atokisana ary efa loadoaka izay mamofona toy ny rotsakazon'ny Nila? Afaka mividy mpanjono ho an'ny sambony ianao amin'ny alalan'ny $4 isanandro. 500 metatra lavitra ilay morondrano, misy nosy tsy misy mipetraka.
Farany, mieritreritra amin'ny fanaovana ilay tapadamba mena manohitra ny SIDA maneraina an'i Kampala i Just Sayin :
Maro ireo olona mino fa ny olona miaina miaraka amin'ilay tsimokaretina irery ihany no tokony hanao izany. Nanohy ny olona iray hafa tamin'ny filazana fa ireo olona hany mitondra ny tsimokaretina no tokony ho mpikatroka miady amin'ny SIDA. Izany hadisoana eh. Izany no fitsaratsarampoana tokony hiadiantsika. Ndeha hatomboka eto, aty amin'ny tanànan'ny blaogy. Mety hahatratra olona mihoatra ny iray isanandro mihitsy aza isika. Vitantsika izany. Tsy amin'ny fiandrasana ny hetsika rehefa 1 Desambra. Tsy afaka miandry ny hahazo anao ny SIDA. Tsia. Ady isanandro izany, toy ireo ataontsika isa-tsegondra amin'ny devoly.